प्रोटिनको कमीका कारण शरीरमा के के हानी हुनसक्छ ? - Hamro Najar
प्रकाशित मिति: २०७७ भाद्र २४, बुधबार (१ साल अघि)
कुनै पनि व्यक्तिको शरीरलाई कति मात्रामा प्रोटिनको आवश्यक्ता पर्छ भन्ने कुरा उसको शरीर, तौल, मांसपेशी, शारीरीक श्रम तथा उमेर अनुसार निर्धारण हुन्छ । जबसम्म शरीरलाई चाहिने प्रोटिनको आवश्यक मात्रामा सेवन गरिदैन, त्यसले अनेकन समस्या निम्त्याउने जोखिम रहन्छ । आखिर, प्रोटिनको कमीका कारण शरीरमा के के हानी हुनसक्छ ?
अनियमित महिवारीका कारण धेरै महिलालाई समस्या हुने गर्छ । अनियमित महिनावारी विशेषगरी पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम ९पिसिओएस्० का कारण हुने गर्छ । पिसिओएस भएमा महिलामा हर्मोन सम्बन्धि समस्या हुनेका साथै बाझोपनाको समस्या निम्तने गर्छ ।
#प्रोटिनको कमीका कारण शरीरमा के के हानी हुनसक्छ ?